आज सोमबार पशुपतीनाथको दर्सन गर्नुहोसःरासिफल – Bannigadhi Today
आज सोमबार पशुपतीनाथको दर्सन गर्नुहोसःरासिफल
धनराज साउँद २०७६ साउन ६, सोमबार ०८:०९
ब्चष्भकखर्च बढ्ने समय रहेको हुँदा धेरै रकम जोहो गर्नुपर्ला। थैलीको मुख बलियो नहुँदा धनमाल हराउन सक्छ। काम बिग्रनाले क्षति वा घाटा हुन सक्छ। भैपरी आउने समस्याले खर्च गराउनेछ। उठ्नुपर्ने रकम तत्काल उठाउँदा लाभांशमा घाटा लाग्न सक्छ। पछिका लागि लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। आफन्तबाट टाढिनुपरे पनि टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नेछ।
न्झष्लष्कर्मक्षेत्र सबल रहनेछ भने विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन्। दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ। व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा हुनेछ। तारिफयोग्य काम गर्दै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ। उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनेछ भने प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। मिहिनेतले सफलताको उचाइमा पुर्याउनेछ। दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ।
शरीर लिएर काममा जुट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अवसर प्राप्त भए पनि ठूलो उपलब्धि उठाउन समय लाग्नेछ। तापनि, प्रयत्न गर्दा जिम्मेवारी पाइनेछ र केही काम बन्नेछन्। गरी आएको कामबाट पनि फाइदै हुनेछ। आश्वासन दिनेहरूले झुक्याउन सक्छन्। अरूको स्वार्थका लागि उपयोग भइएला। पछि फाइदा दिने काम सम्पादन गर्न सकिनेछ।
ख्ष्चनयरमाइलो यात्रा गर्ने अवसर जुर्नेछ। मन मिल्ने साथी भेटिनुका साथै प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिन सक्छ। कामको चापबाट फुर्सद पाइनेछ। व्यवसायले मनग्गे आम्दानी दिलाउनेछ। विभिन्न सहयोग र उपहार प्राप्त हुनेछ। अतिथिका रूपमा मानसम्मान प्राप्त हुनेछ। लगनशीलताले विशेष अवसर प्राप्त हुनेछ। नयाँ तथा रचनात्मक काम प्रारम्भ गर्ने समय छ।
आत्मविश्वासको कमीले काममा पछि परिनेछ। शुभचिन्तकहरूको भावनालाई बेवास्ता गर्दा दुस्ख पाइनेछ। खर्च हुने डरले सताउन सक्छ। वादविवादबाट टाढा रहनुहोला। बलजफ्ती गर्ने बानीले आफैंलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सजग रहनुपर्ला। आजको श्रमबाट पछिलाई फाइदा हुनेछ। आफ्ना सूचनासम्बन्धी गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। ९नेपाली पात्रो०
एष्कअभककाममा केही समय लागे पनि पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ। रमाइलो भेटघाटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द मिल्नेछ। तर आशा देखाउनेहरूको भरपर्दा धोका पाइएला। आफ्नाबाटै टाढिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। नाम र दामका लागि गरिएको प्रयास व्यर्थ हुन सक्छ। आलोचकहरूले कमजोरी औंल्याउने हुँदा सम्भावित संकट भने टार्न सकिनेछ। ने
उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल फलितज्योतिषाचार्य. ९८४१३५२१६४
क्याटेगोरी : जीवन शैली, धर्म संस्कृति, समाज
फेरि पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव स् केही…
कोरोनाको लक्षण देखिए ५ दिन क्वरेण्टीनमा बस्नुपर्ने
विधि विधानको खिल्ली उडाउदै सरस्वती मावि. : शिक्षक…
बतासको सात बुँदे स्पष्टीकरण : कानुन बमोजिम व्यावसायिक…